Gobol ku yaalla Canada oo mamnuucay indha-shareerka - BBC News Somali
Image caption Ma cadda inta haween ee Quebec ku nool ee indho-shareerka xirta
Gobol ka tirsan Canada ayaa meel mariyay sharci dhexdhexaadnimada diinta ah oo lagu muransan yahay kaas oo dadka ka mamnuucaya inay xirtaan indho-shareerka, marka ay bixinayaan ama ay helayaan adeegyada bulshada.
Quebec ayaa dhowaan ballaariyay sharciga iyagoo ku daray adeegyada ay bixiyaan dowladda hoose iyo gawaarida bulshada.
Haweenka xirta indho-shareerka wajigoo dhan daboolaya ayaa haatan ku qasbanaan doona inay wajigooda feydaan marka ay helayaan adeegyada dowladda.
Baarlamaanka Quebec ayaa sharcigan 62 lagu magacaabo ku meel mariyay 66-51 codadka la qaaday. Sharciga ayaa waxaa la soo jeediyay labo sano kahor.
Dadka ka shaqeeya xafiisyada dowladda, saraakiisha booliiska, macallimiinta iyo darawallada basaska, dhaqaatiirta iyo umulisooyinka ka shaqeeya isbitaallada ay dowladdu maamusho iyo xarumaha caafimaadka ayaa laga doonayaa inay wajigooda feydaan.
Sharciga ayaa sidoo kale adeegyada daryeelka carruurta ee gobolka ka reebi doona waxbarashada diiniga ah.
Sharciga Quebec ee 62 ayaan si gaar ah u carrabaabin Muslimiinta.
Dowladda ayaa sheegtay in sharciga uu qabanayo dhammaan noocyada waji-qarsiga, isla markaana aanan loola dan lahayn Muslimiinta.
Balse sharcigan cusub ayaa ayaa saameyn doona haweenka Muslimiinta ah ee indho-shareerka xirta marka ay doonayaan adeegyada dowladda, haddii ay ahaan lahayd inay basaska raacaan amaba inay maktabad tagaan, amaba inay helaan daryeel caafimaad iyo waxbarasho.
Cambaareyn loo soo jeediyay sharcigan ayaa lagu sheegay in haweenka Muslimiinta uu ka mamnuucayo adeegyada dowladda.
Sharci yaqaannada ayaa sheegaya inay filayaan in sharciga 62 lala tiigsan doono maxkamadda.
Tiro dalal Yurub ku yaalla ayaa hore u meel mariyay sharci mamnuucaya indho-shareerka ay ahweenka Muslimiintu xirtaan, dalalkaas oo ay ku jiraan Faransiiska iyo Biljamka sanadkii 2011.